Golaha Wasiirada oo amray in ciidankii lageeyay Beledweyne dib loo soo celiyo (Maxay tahay Sababta?) | HalQaran.com
Muqdisho(Halqaran.com) – Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa manta kulan ka yeeshay Xaaladda siyaasadeed ee dalka, iyadoo Shirka uu guddoomiyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xsueen Rooble.
Kulanka ay maanta yeesheen Golaha Wasiirada ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha taagan oo ay ka mid yihiin Ciidankii dhawaan Dowladdu ku daabushay Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan iyo arrimaha amniga.
Golaha Wasiirrada ayaa isku raacay in ciidammada la geeyay magaalada Beledweyne sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo saaro Magaaladaasi.
Ra’iisul Wasaarare Rooble ayaa magacaabay Guddi Wasiirro ah Hirshabelle iyo Waxgaradka Beledweyne kala Shaqaynayaa dajinta Xiisadda iyo xal u helista Khilaafka taagan.
Dhanka kale Wasiirka amniga ee XFS ayaa sheegay in aysan waxba kala socon Ciidanka la geeyay Magaalada baaldweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Sidoo kale Golaha ayaa ka dooday cabsi gelin ay sheegeen Al-Shabaab ay ku hayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee Suuqa Bakaaraha, waxaana la faray Wasaaradda Amnigu in ay qaaddo.